Angry Birds2အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（230.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Angry Birds 2
သန်းနှင့်ချီသောကစားသမားများနှင့်အတူအခမဲ့နှင့်ယခုပျော်စရာ Slingshot စွန့်စားမှုကိုယခုစတင်ပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပူးပေါင်းပါ, ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့များကိုတက်ပါ, မျိုးနွယ်စုများကိုစုဆောင်းခြင်း, ဦး ထုပ်များကိုစုဆောင်းပါ, သင်၏အသင်းကိုပြောင်းလဲပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော Angry Birds Game တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပြသပါ။
●နေ့စဉ်အခက်အခဲများ။ တစ်မိနစ်ရှိပါသလား နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးအမြန်ဆုများရရှိရန်။
●မိုက်မဲသော ဦး ထုပ်များကိုစုဆောင်းပါ။ သင်၏သိုးစု၏ဖက်ရှင်ဂိမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များတွင်ပါ0င်ရန်မတူညီသောပျော်စရာအခင်းအကျင်းများနှင့်အတူ ဦး ထုပ်များကိုစုဆောင်းပါ။
●သြဂုတ်လတွင်အထူးစိန်ခေါ်မှုများတွင်တန်ခိုးကြီးသောရွှေလင်းတကိုအထင်ကြီးစေပြီးသူ၏သီးသန့်ဆိုင်တွင်ဒင်္ဂါးပြားများ0င်သည်။
●စာရေးတံ အဆင့်ဆင့်။ ပုံမှန်မွမ်းမံမှုများနှင့်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာထပ်မံဖြည့်စွက်ပါ။
●သင်၏ငှက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Slingshot ကိုထည့်ပြီးဝက်ကိုနည်းဗျူဟာဖြင့်အနိုင်ယူရန်ရွေးချယ်ပါ။
●စင်မြင့်အဆင့်ဆင့်။ Play, Play, အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုအဆင့်ဆင့် - သူဌေးဝက်များအတွက်သတိထားပါ!
●အခမဲ့ download လုပ်ပါ။ --- Angry Birds2သည်ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ Angry Birds2ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သော်လည်းရရှိနိုင်သည့် In-app ဝယ်ယူမှုများရှိနိုင်သည်။
- လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့တိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါ0င်သည် အသက် 13 နှစ်ကျော်ပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်ထားသည် - မည်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရန်အလားအလာနှင့်အတူကစားနိုင်သည့်ကစားနည်းများနှင့်ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းမှကစားသမားများယူနိုင်သောအင်တာနက်နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်း။
- Rovio ထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်များ တတိယပါတီများ။
ပုံမှန်ဒေတာလွှဲပြောင်းစွဲချက်လျှောက်ထားပါ။ မှတ်ချက်။ ။ ဂိမ်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကစားသောအခါအော့ဖ်လိုင်းတွင်မပြီးဆုံးသောထပ်ဆောင်းအကြောင်းအရာများကိုတစ်ကြိမ်တည်း download လုပ်သည်။
ဂိမ်းကိုအခါအားလျော်စွာအသစ်ပြောင်းရန်, သို့မဟုတ် bugs သို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာပြ issues နာများကိုဖြေရှင်းရန်။ အကယ်. သင်သည်စာရင်းအင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမတပ်ဆင်ထားပါကဂိမ်းသည်စနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုသင်မထည့်သွင်းပါက Rovio သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်သောဂိမ်းအတွက်မအောင်မြင်ပါ။
ANGRY BIRDS2BOSS KING PIG - RED’S RUMBLE DAILY CHALLENGE (JUN/27/2022)
Angry Birds2AB2 Mighty Eagle Bootcamp (MEBC) - Season 34 Day 28 (Red + Leonard)
SarPu6Fat
Ñáy Ĥțùń Lìñ
Kyaw Wai Phyoe